ပထမအကြိမ် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသ စပါးမျိုးစေ့ကဏ္ဍ ရပ်ဝန်း
Rice Seed Sector Development (RSSD) Project in the Ayeyarwady Delta, which is funded by LIFT, implemented by Welthungerhilfe (WHH, former German Agro Action), and technically assisted by Wageningen University & Research (WUR) from the Netherlands. The following objectives have been pre-defined for the Platform as starting points:
Developajoint action agenda guiding the seed sector development in the region
Elaborate and implement actions that arise from the Platform Meetings
Facilitate partnerships to solve seed sector bottlenecks
Facilitate match-making for the private sector
Link seed demand with seed supply
Contribute to the National Seed Sector Platform Agenda
The facilitation ofaregional Seed Sector Platform Ayeyarwady Delta is part of Component4of RSSD, which intends to strengthen coordination within the seed sector, whereas Component 1 is supporting seed farms’ Early Generation Seed (EGS) production, and Component2is focusing on seed business development. With Component3seed quality assurance shall be improved.
Prior to the first Meeting,aPlatform Secretariat was constituted under the auspices of the Regional DOA. Six problem areas and bottlenecks in the seed sector of the delta had been pre-identified by the Secretariat; six working groups were then put together and prompted to find solutions and developed actions for the prioritized problems:
Group 1: Increasing the uptake of quality seed of improved varieties through variety promotion
Group 2: Incentivizing the private sector to invest in seed production, cleaning & storage
Group 3: Ensuring adequate field inspections and fast seed testing for seed producers
Group 4: Increasing the production of early generation seed at the seed farms
Group 5: Involving rice traders and rice millers in the seed-value-chain
Group 6: Stimulating local seed production and creating market linkages
ဧရာဝတီတိုင်း မြစ်ဝကျွှန်းပေါ်ဒေသ မျိုးစေ့ ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေး စီမံကိန်းအား အလှူရှင် LIFT ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံ Wageningen University & Research (WUR) မှ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကူညီ၍ WHH အဖွဲ့မှ အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ မျိုးစေ့ကဏ္ဍညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို အောက်ပါ အတိုင်း ရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ဒေသအတွင်းမျိုးစေ့ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း
- ဆွေးနွေးပွဲမှ ရရှိလာသော လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား အသေးစိတ်ရေးဆွဲ၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း
- မျိုးစေ့ကဏ္ဍ အခက်အခဲများကို လုပ်ငန်းတွဲဖက်များ ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ကူညီပံ့ပိုးခြင်း
- သတင်းအချက်အလက်များနှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများကို မျှဝေခြင်း
- ကိုယ်ပိုင် မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလုပ်သူများ အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကူညီ ပံ့ပိုးခြင်း
- မျိုးစေ့ဝယ်လိုအားနှင့် ရောင်းလိုအား ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း
- နိုင်ငံတော် မျိုးစေ့ကဏ္ဍ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း
ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွှန်းပေါ်ဒေသ မျိုးစေ့ ကဏ္ဍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲသည် စီမံကိန်း ကဏ္ဍ (၄) အချက်ကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း ကဏ္ဍ (၁)သည် မျိုးစေ့ထုတ်ခြံများ၏ အခြေခံမျိုးသန့်မျိုးစေ့ ထုတ်လုပ်မှုကို ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၊ စီမံကိန်း ကဏ္ဍ (၂)သည် မျိုးစေ့လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၊ စီမံကိန်း ကဏ္ဍ (၃)သည် မျိူးစေ့အရည်အသွေး အာမခံမှု ပိုမိုအားကောင်းလာစေခြင်း တို့ကို ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန၏ ကူညီအားပေးမှုနှင့် မျိုးစေ့ ကဏ္ဍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဦးဆောင်ကော်မီတီဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မျိုးစေ့ ကဏ္ဍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး ဦးဆောင်ကော်မီတီအစည်းအဝေးတွင် မျိုးစေ့ ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေသော အခက်အခဲများမှ အောက်ဖေါ်ပြပါ ဦးစားပေး အချက် (၆) ခုကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ မျိုးစေ့ ကဏ္ဍ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲတွင် ကဏ္ဍ ပေါင်းစုံပါဝင်သော အုပ်စု (၆) ခုက ဆွေးနွေးကြပြီး ဖြေရှင်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ဖေါ်ထုတ်ကြသည်။ ထိုအချက်များမှာ --
အဖွဲ့ (၁) အရည်အသွေးကောင်းမျိုးသန့်မျိုးစေ့များအား တောင်သူများရယူသုံးစွဲ မှု မြင့်မားလာစေခြင်း
အဖွဲ့ (၂) မျိုးစေ့ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သန့်စင်ခြင်းနှင့် သိုလှောင်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရှိလာစေရန် အခြေအနေကောင်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း
အဖွဲ့ (၃) မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်သူများအတွက် လုံလောက်သော ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခြင်းနှင့် မျိုးစေ့စစ်ဆေးခြင်းကို အလျှင်မြန်ဆုံးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း
အဖွဲ့ (၄) မျိုးစေ့ထုတ်ခြံများမှ အခြေခံမျိုးသန့်မျိုးစေ့များ(EGS) ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်မြင့်မားလာစေခြင်း
အဖွဲ့ (၅) စပါးမျိုးစေ့ ကဏ္ဍ တန်ဘိုးကွင်းဆက်တလျှောက်တွင် ဆန်စပါးကုန်သည်များ ဆန်စက်ပိုင်ရှင်များ ပူးပေါင်းပါဝင်လာစေခြင်း
အဖွဲ့ (၆) ဒေသတွင်းမျိးစေ့ ထုတ်လုပ်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးခြင်း နှင့် မျိုးစပါးဈေးကွက် ဖေါ်ဆောင်ခြင်း
Working members of the Seed Platform